Sababaha Guud ee Musuqmaasuqa Macluumaadka Helitaanka
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Sababaha Guud ee Musuqmaasuq Helista
Sababaha Guud Waxay Ka Dhigaan Macluumaadka Helitaanka Microsoft Musuqmaasuq ama Waxyeello Soo Gaarto
Waxaa jira sababo badan oo sababi doona in faylkaaga Access MDB uu kharribmo ama waxyeelleeyo. Waxaan u kala saaraynaa laba qaybood, tusaale, sababaha qalabka iyo sababaha softiweerka.
Mar kasta oo qalabkaagu ku guuldareysto keydinta ama wareejinta xogta keydka macluumaadkaaga, macluumaadka waxay u badan tahay inay xumaadaan. Inta badan waxaa jira saddex nooc:
Ka Fashilka Qalabka Kaydinta Xogta. Tusaale ahaan, haddii disk-kaaga adag uu leeyahay qaybo xun oo faylkaaga Access MDB uu ku kaydsan yahay qaybahaas. Markaas waxaad akhrin kartaa oo keliya qayb ka mid ah faylka MDB. Ama xogta aad aqrisay waa khalad oo khaladaad ayaa ka buuxa.
Qalab Isku Xirka. Tusaale ahaan, Diiwaanka Helitaanka wuxuu ku nool yahay serverka, waxaadna isku dayeysaa inaad ka soo gasho kombiyuutarka macmiilka, adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha shabakadda. Haddii kaararka isku xirka shabakadu, cables, router, hubs iyo qalab kasta oo kale oo sameeya isku xirnaanta shabakadaha ayaa leh dhibaatooyin, markaa marinka fog ee xogta MDB ayaa laga yaabaa inay ka dhigto mid musuqmaasuq ah.
Fashilka Awooda. Haddii cillad koronto dhacdo markii aad galaysid keydka xogta MDB, taasi waxay dhaawac u geysan kartaa faylashaada MDB.
Waxaa jira farsamooyin badan oo looga hortago ama loo yareeyo musuq-maasuqa marin-u-helka sababo la xiriira dhibaatooyinka qalabka, tusaale ahaan, UPS waxay yareyn kartaa dhibaatooyinka cilladda korantada, iyadoo la adeegsanayo aaladaha qalabka ee lagu kalsoon yahay waxay sidoo kale yareyn kartaa fursadaha musuqmaasuqa xogta.
Sidoo kale waxyaabo badan oo musuqmaasuq ah 'Access database' ayaa ku dhaca arrimo la xiriira barnaamijyada.
Soo Celinta Nidaamka Faylka aan Sax ahayn Waxaa laga yaabaa inaad u aragto inay tahay wax aan la rumaysan karin in soo kabashada nidaamka faylka ay sababi karto galaangal u yeelashada xogta. Laakiin xaqiiqda, mararka qaarkood marka nidaamka faylkaaga la jajabiyo, oo aad isku daydo inaad shaqaaleeysid qalab kabashada xogta ama khabiir ku takhasusay si aad uga soo kabato faylasha MDB ee ku yaal, feylasha la soo helay wali way musuqmaasuqayaan, maxaa yeelay:
Musiibada nidaamka faylka awgeed, qaybo ka mid ah faylka keydka xogta MDB ee asalka ah ayaa ah lost si joogto ah, ama dib loogu qoro xogta qashinka, taas oo ka dhigaysa faylka MDB ee la badbaadiyay kama dambaysta inuu dhammaystirmo ama ku jiro xog qaldan.
Qalabka soo kabashada ama khabiirku ma laha khibrad ku filan oo ah inuu isagu / soo ururiyey qaar ka mid ah xogta qashinka oo u kaydiyey inuu yahay fayl leh fidinta .MDB. Maaddaama faylalkaan loogu yeero .MDB aysan ku jirin wax xog ah oo ansax ah oo ku saabsan keydka keydka macluumaadka, gebi ahaanba waa kuwo aan waxtar lahayn.
Qalabka soo kabashada ama khabiirka ayaa soo aruuriyay xayiraadaha xogta saxda ah ee faylka MDB, laakiin kuma uusan darin qaab sax ah, taas oo sidoo kale ka dhigaysa faylka MDB ee la badbaadiyey ee aan la isticmaali karin.
Sidaa darteed, markay masiibo nidaamka fayl dhacdo, waa inaad heshaa qalab kabashada xogta wanaagsan / khabiir si aad uga soo kabato faylasha keydka xogta MDB. Qalab / khabiir xun ayaa xaalada ka sii dari doona halkii laga fiicnaan lahaa.
Virus ama Software kale oo xaasidnimo ah. Fayrasyo ​​badan, sida Trojan.Win32.Cryzip.a, waxay qaadsiin doontaa oo dhaawici doontaa gelitaanka MDB faylasha ama waxay ka dhigi doontaa meel aan la geli karin. Waxaa si aad ah loogu talinayaa in lagu rakibo software anti-virus tayo leh nidaamka keydka macluumaadkaaga.
Qor Qalitaanka Hawlgalka. Xaaladda caadiga ah, waa inaad si quruxsan uga tagtaa Helitaanka adoo kaydinaya dhammaan isbeddeladaada keydka xogta MDB ka dibna riix sheyga "Bax" ama "Xidh". Si kastaba ha noqotee, haddii Helitaanka loo xiro si aan caadi ahayn markaad furayso oo aad wax u qoreyso xogta MDB, markaa mashiinka macluumaadka Jet wuxuu calaamadeyn karaa keydka xogta inuu yahay tuhmane ama la musuqmaasuqay. Tani waxay dhici kartaa haddii korontada oo aan kor ku soo xusnay ay dhacdo, ama haddii aad ka baxdo Helitaanka adiga oo gujinaya "End Task" oo ku jira Windows Task Manager, ama haddii aad damiso kombuyuutarka adiga oo aan iska dhaafin Access iyo Windows sida caadiga ah.
Calaamadaha Databatooyinka Helitaanka Musuqmaasuqa:
Tixraac ahaan, waxaan ururinay liiska khaladaadka marka la galayo faylka MDB khaldan.
Dayactir Macluumaadka Helitaanka Musuqmaasuqa:
Waxaad isticmaali kartaa badeecadeena abaalmarinta ku guuleysatay DataNumen Access Repair ilaa dib u soo cesho kaydka xogta keydka ee helitaankaaga.
Musuqmaasuqa Microsoft Access MDBs FAQ